Cheetah Digital: Ahoana ny fampidirana ny mpanjifa amin'ny toekarena fitokisana | Martech Zone
Nanangana rindrina hiarovana ny tenany amin'ireo mpisehatra ratsy ireo mpanjifa, ary nampiakatra ny fari-piainan'izy ireo amin'ireo marika fandaniany ny volany.
Ireo mpanjifa dia maniry ny hividy amin'ny marika izay tsy mampiseho andraikitra ara-tsosialy fotsiny, fa izay mihaino ihany koa, mangataka fanekena ary hanaja ny fiainany manokana. Io ilay antsoina hoe toekarena fitokisana, ary zavatra tokony hananan'ny marika rehetra laharam-pahamehana amin'ny paikadin'izy ireo izany.
Miaraka amin'ireo olona iharan'ny hafatry ny varotra maherin'ny 5,000 isan'andro, ny marika dia tsy maintsy miezaka mamorona io fotoana majika io izay misarika ny saina sy manamora ny fifandraisan'ny mpivarotra mivantana. Fa ahoana no ahafahan'ny marika antsinjarany manapaka amin'ny marketing tabataba nefa tsy mampihoron-koditra?
Ny valiny dia ny manolotra fifanakalozana sanda azo tsapain-tanana. ny fifanakalozana sandany dia eo ny mpivarotra no manolotra ny mpanjifa zavatra ho setriny ho an'ny sain'izy ireo, ny firotsahana ary ny angona tiany. Ary tsy voatery ho fihenam-bidy na litera mena foana akory izany; ny atiny manokana, ny kudos ara-tsosialy, ny tolo-kevitr'olon-tokana ary ny teboka tsy fivadihana dia mety ho mpanentana amin'ny fanangonana angon-drakitra sy data natokana ho an'ny antoko tsy misy ihany koa.
Tokony hialana amin'ny fividianana doka, angona avy amin'ny antoko fahatelo, ary hitsikitsiky ny mpanjifa ny marika, fa hiezaka kosa hanana fifandraisana marina sy mivantana ary sarobidy kokoa amin'ny mpanjifa. Tsy vitan'ny hoe manome marika ny marika izy io, fa manome fifanakalozana sandan'ny valiny ho an'ny data momba ny mpanjifa, ny fidirana an-tsehatra ary ny tsy fivadihana dia ahafahan'ny marika mifandray mivantana amin'ireo mpanjifa ary mitarika fandraisana andraikitra manokana.
Paradox momba ny fiainana manokana
Ny mpivarotra tsara rehetra dia mahalala ny fahombiazan'ny taonan'ny mpanjifa dia ny famoronana traikefa marika manokana izay miresaka mivantana amin'ny filan'ny mpanjifa. Nefa na dia ankafizin'izy ireo aza ny fahafaha-manaony sy ny maha-zava-dehibe izay entin'ireny firaketana manokana ireny, mailaka ihany koa ny mpanjifa mitazona ny angon-drakitra manokana ary mitaky fitomboan'ny tsiambaratelo an-tserasera. Vao mainka naloto ity olana ity taorian'ireo hadisoam-pitokisana lehibe sy fanitsakitsahana data izay nahatonga ny lalàna sy ny lalàna momba ny fiarovana ny angona miha henjana. Fa ny angona manokana sy ny varotra kendrena dia mifanome tanana.
Ka inona no hataon'ny mpivarotra? Ity no paradisa miafina. Miandrandra ny fiainana manokana sy ny traikefa napetraka manokana ny mpanjifa. Azo atao ve ny manatitra azy roa? Ny valiny fohy dia Eny. Miaraka amin'ny fomba vaovao momba ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa, fanoloran-tena amin'ny fiarovana isaky ny ambaratongan'ny fikambanana, ary fiambenana sy mavitrika amin'ny fitantanana ny risika, ny marika dia afaka mamaly ny andrasan'ny mpanjifany momba ny mangarahara sy ny fifehezana, na dia mbola mampifaly azy ireo amin'ny traikefa manokana aza. amin'ny alàlan'ny angona.
Cheetah Digital dia mpamatsy vahaolana amin'ny fidirana an-tserasera ho an'ny mpanjifa maoderina. Fantatr'i Cheetah fa ny marika ankehitriny dia mitaky vahaolana hanomezana anao ny fiarovana, ny fahaizan'ny lakroa, ny mekanika fifanakalozana soatoavina ary ny traikefa tena antenain'ny mpanjifa.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Cheetah Digital dia ekena amin'ny sehatry ny tsy fivadihana ary miara-miasa amin'ny Vans. Powered by Cheetah Loyalty, Vans dia namorona ny Vans Family, programa tsy fivadihana fifandraisana sy intuitive natao hamantarana, hanomezana valisoa ary hankalazana ireo mpankafy ny momba azy ireo sy ny zavatra tian'izy ireo atao. Manamora ny fifampiresahana roa tonta amin'ny mpanjifa ity programa ity.
Ny mpikambana dia mahazo fidirana amin'ny fifaninanana manokana sy traikefa manokana, kiraro sy kojakoja namboarina ary topi-maso amin'ny famoahana vokatra ho avy. Ho fanampin'izay, ny mpikambana dia mahazo isa amin'ny fiantsenana sy ny fanaovana marika. Tao anatin'ny roa taona latsaka dia nahasarika mpikambana maherin'ny 10 tapitrisa ho an'ny Vans Family any Etazonia ny Vans ary mandany 60 isan-jato mihoatra ny tsy mpikambana ny mpikambana ao amin'ny programa.
Ny Cheetah Digital Customer Engagement Suite dia mamorona fotoana misy lanja eo amin'ny mpanjifa sy ny marika. Izy io dia manambatra ny halalin'ny sakan'ny angon-drakitra mavesatra miaraka amin'ny fahafaha-manao fanatanterahana amin'ny alàlan'ny famindrana lakilasy amin'ny vahaolana tokana sy mirindra. Ny Customer Engagement Suite dia misy:
Fanandramana Cheetah - Manome traikefa momba ny fahazoana mpanjifa nomerika ifandraisana izay ahafahan'ny marika manangona angon-drakitra voalohany sy tsy misy antoko ary manome fahazoan-dàlana sarobidy ilaina amin'ny fanatanterahana fampielezan-kevitra amin'ny serivisy fifampiraharahana mifanaraka sy mahomby.
Hafatra Cheetah - Ahafahan'ireo mpivarotra mamorona sy mamoaka fanentanana manokana momba ny varotra manokana manerana ny fantsona sy ny lafiny rehetra.
Fahatokiana an'i Cheetah - Manome ny mpivarotra fitaovana hamoronana sy hanaterana programa tsy fivadihana tsy manam-paharoa izay miteraka fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny marika sy ny mpanjifany.
Sehatra data Cheetah Engagement Data - Ny angon-drakitra fototra sy motera fanamoriana izay ahafahan'ny mpivarotra mandroaka angona avy amin'ny fahitana manan-tsaina ho amin'ny hetsika haingana sy refy.
Miaraka amin'ny mpanjifa 3,000, mpiasa 1,300 13 ary misy any amin'ny firenena 1, Cheetah Digital dia manampy ny mpivarotra handefa hafatra mihoatra ny XNUMX miliara isan'andro.
Miresaka amin'ny Cheetah Digital Expert
Tags: cheetah digitalsehatra angona fifampiraharahana cheetahtraikefa cheetahtsy fivadihan'ny cheetahfandefasana hafatra cheetahfahazoana mpanjifaDatamailaka Marketingmpamatsy tolotra mailakaESPprograma tsy fivadihanapersonalizationny fiainana manokanaparadisa miafinatoekarena fitokisanafifanakalozana sandany